Google inotaridzirwa semhare ye SEO nemakambani mazhinjikugadziridza iyo injini yekutsvaga. Kunyange zvakadaro, chirongwa che SEO chinoshandiswa neGoogle chinowedzera kutevedzera iyo yakagamuchirwa neBing, uyesaka, kumutsa mubvunzo kana masangano achida kugadzirisa Bing SEO zvakare. Yahoo uye Bing inotarisa zvishoma30 muzana yemugove wemugove, uye naizvozvo, havakwanisi kutaridzirwa maererano nekugadzirisa. SEO mararamiro emitemo yeGoogle uye Bing vane kusiyana kwakasiyana-siyana uye kufanana kwekufunganya.
Izvi zvinotevera, zvakataurwa Alexander Peresunko, Mutengi weKuteresi Achibudirira Semalt Nhare dzeDhijita, kusiyanisa Google kubva kuBing:
Nei Bing iri dambudziko rekutambudzika?
Kugadziridza paBing kuchakupa muganhu unopikisana kubva pane dzakawandamabhizimisi anofunga kugadzirisa chete Google. Bing ne Yahoo ikozvino inotungamirira 30% yekutsvaga uye saizvozvo, kukuparuoko rwepamusoro kuti uwane vashandi vanogona, avo vadzikwi vako vangave vasingafariri.
Kushandisa Bing ne Yahoo kunogonawo kuita kuti munhu ave nehuwandu hwevanhuvanhu vane zvikonzero zvakasiyana-siyana vasingagoni kushandisa Google. Izvi zvinoenderana nevari kutarisa vatariri, zvikamu zvenyika pamwe chetesemhuri. Sezvo Google inowanzoita zvigadziriswe nguva dzose, bhizimisi inogara iri mukana wekuparadzira zvayokune vakawanda vateereri pa Yahoo neBing, sezvo iri kuedza kuronganiswa neGoogle updates.
Google SEO yakasiyana sei neBing SEO?
Kutungamirirwa nekushamiswa kweSmartMetrics yakapfuura, pasi apa pane zvimwe zvinokosha zveBing SEO kusarudzwa zvinhu:
Makambani akakwirira anowanzotarirwa akakwirira sezvakaitwa neGoogle.
Zviratidzo zvepabonde zvakabatana zvakanyanya zvakakosheswa.
Nhamba dzekare shure dzinoratidza kushamwaridzana kwepedyo nepamusoro-soro.
Nhaurirano yehutano uye yakakosha inokosha pakutsvaga kutsvaga.
Imwe peji mapeji emichina ane basa rinokosha..
Nyanzvi kubva kuSemalt inopawo tsanangudzo yezviri pamusoro apazvinhu zvinowedzera kune vamwe zvaunofanira kufungisisa pakunatsiridzira Bing.
1. Nhamba YepaIndaneti uye Marikisi Akasiyana
Kusiyana neGoogle, Bing haawani matambudziko apokusiyanisa mabhizimisi kubva kune vanobatana. Uyewo, Bing inoda mapuratifomu ekare ane mazita echirongwa chetsika zvakadai se .edu kana .govachifungidzira kuti Bing inonyanya kutsvaga pane zvinogadziriswa zvakakosha.
Mukuenzanisa neGoogle, Bing zvinonetsa pamagariro evanhuzvichikonzera mamwe ma tape, mashizha, uye zvaanoda kuti zvigadziriswe zvakanaka. Google inenge ichiri kubatanidza mapuruzhinji evanhumitsva yavo yekutsvaga kubudirira.
Kusiyana neGoogle, pane peji rekuchengetedza maitiro ayo muBing index,zvinotarisirwa kuva nechepakati peimwe yekunze kwekubatana nayo.
4. Nzvimbo uye Zviripo
Unhu uye hunoenderana nehuwandu hunoita kuti pave nehupamusoro hweBing mbirineGoogle, asi yekare ndiyo inoshanda yakanakisisa yekuziva nzvimbo dzinoshandisa flash, iyo isipo muGoogle. Bing zvakare kudzokamigumisiro yeduku duku apo Google inotarisa pamakambani akavakwa zvakanaka.
Pamusoro pemapeji ekunze, Bing ine hukama hwakasimba nemapeji epamba sezvaanoenzaniswa neGoogle. Uyewo, Bing inobva pamazwi makuru mumeta tags uye mapeji epa peji apo Google inowanzowedzeramaererano nemaonero epeji.
Unofanira kufungisisa kusiyana pakati peGoogle neBing nzvimbo yezvinhuusati waita zvisarudzo zvichiita kuti uwedzere nzvimbo yewebsite yako pazvinhu zvose zviri kutsvaga Source .